Chii Chinonzi Kutambudzika Kukuru? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Turkmen Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Chii Chinonzi Kutambudzika Kukuru?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Chii Chinonzi Kutambudzika Kukuru?
Kutambudzika kukuru kuchaita kuti pave nenguva yematambudziko akakura asati amboonekwa nevanhu. Sezvinotaurwa neuprofita hweBhaibheri, kuchaitika ‘mumazuva okupedzisira’ kana kuti “nguva yokupedzisira.” (2 Timoti 3:1; Dhanieri 12:4, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Kuchava “kutambudzika kusina kumboitika kubvira pakutanga kwezvisikwa zvakasikwa naMwari kusvikira panguva iyoyo, uye hakuzoitikizve.”​—Mako 13:19; Dhanieri 12:1; Mateu 24:21, 22.
Zvichaitika munguva yekutambudzika kukuru
Kuparadzwa kwechitendero chenhema. Chitendero chenhema chichaparadzwa nekukurumidza zvinoshamisa. (Zvakazarurwa 17:​1, 5; 18:​9, 10, 21) Hurumende dzinomiririrwa nesangano reUnited Nations dzichange dzichiita kuda kwaMwari padzichaparadza chitendero ichi.​—Zvakazarurwa 17:​3, 15-​18. *
Kurwiswa kwechitendero chechokwadi. Mubatanidzwa wemarudzi uyo unotaurwa nezvawo ‘saGogi wenyika yeMagogi’ mune zvakaonekwa naEzekieri, uchaedza kuparadza vanamati vechokwadi. Asi, Mwari achadzivirira vanamati vake kuti vasaparadzwa.​—Ezekieri 38:​1, 2, 9-​12, 18-​23.
Kutongwa kwevagari vepanyika. Jesu achatonga vanhu vese uye “achaparadzanisa vanhu mumwe achibva kune mumwe, sokuparadzanisa kunoita mufudzi makwai nembudzi.” (Mateu 25:31-​33) Achatonga mumwe nemumwe maererano nekutsigira kana kuti kusatsigira kwaaiita “hama” dzaJesu, kureva vaya vachatonga pamwe chete naye kudenga.​—Mateu 25:34-​46.
Kuunganidzwa kwevachanotonga muUmambo. Vanhu vakatendeka vakasarudzwa kunotonga naKristu vachapedza upenyu hwavo hwepanyika vomutswa kuti vazorarama kudenga.​—Mateu 24:31; 1 VaKorinde 15:50-​53; 1 VaTesaronika 4:​15-​17.
Amagedhoni. Iyi “hondo yezuva guru raMwari Wemasimbaose” inonziwo “zuva raJehovha.” (Zvakazarurwa 16:14, 16; Isaya 13:9; 2 Petro 3:​12) Vaya vanenge vatongwa naKristu kuti vanhu vakaipa, vachaparadzwa. (Zefaniya 1:​18; 2 VaTesaronika 1:​6-​10) Izvi zvinosanganisira kuparadzwa kwehurumende dzese dzepanyika, idzo dzinotaurwa muBhaibheri sechikara chine misoro minomwe.​—Zvakazarurwa 19:19-​21.
Zvichaitika pashure pekutambudzika kukuru
Kusungwa kwaSatani nemadhimoni ake. Ngirozi huru ichakanda Satani nemadhimoni ake “mugomba rakadzikadzika,” izvo zvinoratidza kuti vanenge vakangoita sevakafa. (Zvakazarurwa 20:1-3) Panguva iyoyo Satani achange akaita seari mujeri; achange asina simba pachinhu chero chipi zvacho.​—Zvakazarurwa 20:7.
Kutonga kwemakore ane chiuru kunotanga. Umambo hwaMwari huchabva hwatanga kutonga kwemakore ane chiuru, zvoita kuti vanhu vawane makomborero akawanda. (Zvakazarurwa 5:9, 10; 20:4, 6) “Boka guru revanhu” vasingakwanisi kuverengwa ‘richabuda mukutambudzika kukuru,’ uye richaona kutanga kwemakore ane chiuru ekutonga kweUmambo panyika.​—Zvakazarurwa 7:9, 14; Pisarema 37:9-11.
^ ndima 5 Mubhuku raZvakazarurwa, chitendero chenhema chinotaurwa nezvacho seBhabhironi Guru kana kuti “hure guru.” (Zvakazarurwa 17:​1, 5) Chikara chitsvuku, icho chichaparadza Bhabhironi Guru, chinomiririra sangano rine chinangwa chekubatanidza uye kumiririra nyika dziri pasi rese. Chakatanga chichizivikanwa seLeague of Nations asi iye zvino chava kunzi United Nations.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chii Chinonzi Kutambudzika Kukuru?